Torkia dia mamerina ny serivisy fiaran-dalamby mpandeha amin'ny antsasaky ny fahaizany
Home » Vaovao momba ny fitaterana » Torkia dia mamerina ny serivisy fiaran-dalamby mpandeha amin'ny antsasaky ny fahaizany
vorontsiloza nanohy ny serivisy fiaran-dalamby mpandeha, taorian'ny fampiatoana roa volana, satria nanalefaka ny fameperana napetraka ny fitondrana mba hiarovana ny fiparitahan'ny Covid-19 otrik'aretina.
Ny serivisy fiaran-dalamby eo an-tanàna dia natomboka tamin'ny fotoana voafetra androany tamin'ny fiaran-dalamby haingam-pandeha izay niainga avy tao Ankara renivohitra, ho any Istanbul tamin'ny 7 ora maraina (04:00 GMT). Hanao dia 16 isan'andro ny lamasinina, mampitohy ny tanànan'i Ankara, Istanbul, Konya ary Eskisehir.
Ny lamasinina dia miasa amin'ny antsasaky ny fahaizany. Ireo mpandeha ihany no avela hiondrana an-tsambo miaraka amina kaody navoakan'ny governemanta izay manamarina fa tsy arahi-maso noho ny aretina ahiahiana Covid-19 izy ireo.
Torkia dia nitatitra efa ho 160,000 ny tranga voamarina fa COVID-19 hatramin'ny alakamisy, anisan'izany ny fahafatesan'ny 4,431.